Olee otú mbupụ Notes si iPhone, iPad na iPod Touch ka Computer
Olee otú mbupụ Notes si iPhone, iPad na iPod aka ka Computer
> Resource> iPhone> Olee mbupụ Notes si iPhone, iPad na iPod aka ka Computer
Gị iPhone, iPad, ma ọ bụ iPod Touch esetịpụ gị dum dee akụkọ ihe mere eme na ya na Notes ngwa. Ọ ga-abụ nzukọ ihe unu na mberede ida ngwaọrụ gị na ihe ndị a niile ndetu na-ehichapụ. Ya mere, mgbe nile akwado gị ndetu na iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka dị oké mkpa. Ya mere, ka ikwu banyere otú mbupụ iPhone, iPad ma ọ bụ iPod emetụ ndetu gị na kọmputa maka ndabere.
Olee otú mbupụ ndetu si iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka ka kọmputa
N'ezie, iTunes nwere ike inyere ndabere gị data nke iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka mgbe ị na-mmekọrịta na ya. The ọjọọ na-ekwu bụ na iTunes ndabere faịlụ bụ ụdị Sqlitedb faịlụ, nke na-adịghị ekwe ka ị na-ele ma ọ bụ nweta ọdịnaya nke ya. Ọzọkwa ọzọ, nkwado ndabere na mpaghara faịlụ a ga-emelite kwa oge mgbe ị mmekọrịta gị na ngwaọrụ, na ị ga-atụfu aga na data mgbe mmekọrịta. Mbupụ gị iPhone ndetu, gị mkpa ọzọ-atọ ndị ọzọ omume.
A bụ m nkwanye: Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery) (Windows) ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac iPhone Data Recovery) (ọhụrụ akwado iOS 9), nke-enye gị ohere kpọmkwem ike iṅomi na mbupụ ndetu si iPhone, iPad na iPod aka ka gị na kọmputa dị ka a ogugu HTML faịlụ. Ọzọkwa, ị nwere ike mbupụ ọzọ data na ngwaọrụ gị, kwa, dị ka photos, videos, kọntaktị, ozi, wdg Gụọ na na-eso nzọụkwụ n'okpuru mbupụ gị data.
Download ikpe mbipute n'okpuru na-agbalị ya maka free!
Nzọụkwụ 1: Ẹkedori usoro ihe omume na jikọọ na ngwaọrụ gị
Nke mbụ niile, ẹkedori Dr.Fone na kọmputa gị mgbe echichi, na jikọọ gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka. Mgbe ị na ngwaọrụ ahụrụ, ị ga-esi na interface n'okpuru.
N'ihi na iPhone 6S / 6S Plus / 6 Plus / 6 / 5C / 5S / 5 / 4S, iPad na Retina ngosi, iPad Obere, The ọhụrụ iPad Pro, iPad 2 na iPod aka 5 ọrụ:
N'ihi na iPhone 4 / 3GS, iPad 1 na iPod aka 4 ọrụ: Ị chọrọ ibudata a nkwụnye maka ngwaọrụ gị ebe a.
Nzọụkwụ 2: Iṅomi ngwaọrụ gị
Ugbu a, ị nwere ike na-pịa Malite iṅomi na window nke usoro ihe omume ka iṅomi gị iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5C / 5S / 5 / 4S, iPad na Retina ngosi, iPad Obere, The ọhụrụ iPad, iPad 2 , iPad Ikuku na iPod emetụ 5.
Ọ bụrụ na ị na-eji iPhone 4 / 3GS, iPad 1 ma ọ bụ iPod aka 5, na-eso nduzi n'okpuru-esi banye scanning mode ike iṅomi ya:
Jide ngwaọrụ gị na pịa Malite bọtịnụ.
Jide Ike na Home buttons n'otu oge ozugbo ke Nzọụkwụ otu, maka kpọmkwem 10 sekọnd.
Mgbe 10 sekọnd, hapụ Ike button ma na-na ịpị Home button ọzọ 10 sekọnd ruo mgbe ị na-gwara na ị na-aga nke ọma banyere scanning mode.
Mgbe ahụ, Wondershare Dr.Fone ga-amalite ịgụ isiokwu ngwaọrụ gị maka data na ya.
Nzọụkwụ 3: Export ndetu na iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka
Mgbe iṅomi completes, niile data na ngwaọrụ gị ga-scanned na-egosipụta na edemede, ọ bụghị nanị na ndetu, dị ka ozi kọntaktsị, igwefoto mpịakọta, wdg Ịnwere ike ihuchalu gị na ndetu otu mgbe ọzọ tupu exporting. Akara ndị ị chọrọ na pịa Naghachi, ị nwere ike mbupụ ha niile na kọmputa gị na otu Pịa.
Cheta na: Notes ịchọta ebe a na-abụghị nanị ndị ugbu a na gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka, ma ndị na-ehichapụ n'anya. Wondershare Dr.Fone Nwere ike inyere ịchọta gị na-adịbeghị anya na-ehichapụ ọ bụ furu efu data ebe a.
I nwekwara ike na-ekiri ndị video nkuzi n'okpuru.
Cheta na: Wondershare Dr.Fone-enye gị ohere wepụ gị iTunes ndabere maka niile iOS ngwaọrụ ma ọ bụrụ na ị nwere otu. Dị nnọọ ime ya na mgbake mode nke naputa site na iTunes ndabere File.
Olee otú Naghachi Notes si zuru iPhone, iPad ma ọ bụ iPod Touch
Otú e si edozi iPhone Notes Icon efu ma ọ bụ Zoro
iPhone Kpọtụrụ Manager maka iPhone 5s / iPhone 5c / iPhone 5
iPhone 6s (Plus) na mmiri na-ezo Asịrị
2 Ụzọ Tinye Photos ka iPhone na Atụmatụ Ịlụ More Space maka iPhone
Olee otú Email Multiple Photos si gị iPhone
Olee otú Hichapụ iPhone Data enweghị Weghachi
Olee otú mbubata Photos si iPhoto ka iPhone